Mogadishu Journal » 2018 » April » 10
Dowlada Imaaraadka Carabta oo war kulul ka soo saartay lacagtii lagu qabtay Muqdisho
Mjournal :-Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa war kulul ka soo saartay tallaabaadii ay dowladda Soomaaliya kula wareegtay lacag u socotay ciidamada Soomaaliya iyo xayiraadda diyaaradii siday. War cad oo kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha dibada Imaaraadka ayaa si weyn loogu...
Mjournal : -Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Magaalada Baydhabo ee xarunta Goblka Baay Qarax khasaare geystay ayaa maanta ka dhacay Barkontorool oo ku taalla Duleedka Galbeed ee Magaalada Baydhabo. Qaraxan oo nuuciisa uu ahaa Miinada dhulka lagu aaso ayaa waxa uu si...
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Guddoomiyihii Baarlamaanka ee xilka iska casilay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa goor dhow si wadajir ah shir jaraa’id ugu qabtay madaxtooyada Villa Soomaaliya. Guddoomiye Jawaari oo hadalka ku horeeyay ayaa...
Dagaal culus oo ka socda qeybo ka mid ah degmada Dherkeenley
Mjournal :- Wararka inaga soo gaaraya xaafada Silliga ee Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal uu ka socdo halkaasi. Dadka degaanka ayaa waxa ay inoo sheegeen in dagaalkan uu u dhaxeeyo laba ciidan oo ka tirsan dowladda Federalka Soomaaliya,...
DF oo ku dhawaaqday guddi iskaashi iyo wada-shaqeyn toos ah la yeelanaya QM
Mjournal :-Kulankii ugu horreeyay ee lagu qabtay shalay xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibadda, ayaa Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay kaga dhawaaqday dhismaha guddiga xiriirka ee dalka martida loo yahay, kaasi oo u idman la shaqeynta iyo inuu iskaashi toos ah...
Dagaal ka dhacay deegaanka Fafaxdhuun ee gobolka Gedo
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac geystay oo ciidamada Kenya iyo xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab ku dhexmaray degaanka Faxfax-dhuun oo ka tirsan Gobolka Gedo. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii xoogag ka tirsan ururka...